Ururka SYL2 oo arday u furay tababarka ciyaarta Shataranjiga + Sawirro | Somchess.net
You are here : Somchess.net » Sawirada » Ururka SYL2 oo arday u furay tababarka ciyaarta Shataranjiga + Sawirro
Munaasabad maanta lagu qabtay Xarunta Jaamacada Horseed ee Magaalada Muqdisho ayaa xiriirka Soomaaliyeed ee Cayaaraha Shataranjiga uu Tababar uga Furay illaa 30 Arday oo Isugu Jira Gabdho iyo Wiilal iyadoo Tababarkuna uu socon doono muddo bil ah. Guddoomiyaha Xiriirka Cayaaraha Shataranjiga Axmad Xasan Cabdi Wataac oo Munaasibadda Ka Hadlay ayaa ka warbixiyay Taariiqda Cayaaraha Shataranjiga halka ay caalamka Ka soo bilaabatay iyo waqtigii ay Soomaaliya soo gaartay.
Mr. Wataac ayaa intaa raaciyey in loo baahan yahay in dhammaan laga wada qeyb qaato waayo buu yiri waa ciyaar ay ciyaari karaan 60 jir iyo 6-jir.
Sidoo kale qaar ka mid ah dadka iyagu ka faa’iideystay taba barkan oo idaacadda Risaala kula kulantay goobta xafladda ayaa sheegay in aad u soo dhaweynayaan tabarkan maanta furmay ayan ka faa’iideysan doonaan.
Ugu dambeyntii Xafladda ayaa waxaa soo gunaanaday C/llaahi Axmed oo ka mid ah masuuliyiinta sar sare ee ururka SYL 2, waxaana uu sheegay in uu si aad uga mahad celinayo kaalinta ay ka geysatay xiriirka Soomaaliyeed ee Cayaaraha Shataranjiga oo ah taba barkani hay’adda taaba galinaysa.
Munaasabaas ayaa si heer sare ah ku soo idlaatay waqtigii loogu talo galay waxaana ururka soo qaban qaabiyey ee SYL 2 uu ka shaqeeyaa nabadda iyo isku xirka dhallinyarada.
« Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga iyo qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyada Gobolka Banaadir oo kulan yeeshay
Xulka ciyaartoyda Shataranjiga Soomaaliya oo la ciyaaray shan dal tartanka All Arab Games »